Global Voices teny Malagasy » Mibilaogy ny nofinofy: Vinany mankany amin’ny Fampiharana · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 13 Jona 2019 18:16 GMT 1	 · Mpanoratra Juhie Bhatia Nandika avylavitra
Anatin'ny fotoana fanaovana fampiharana tsara mihitsy izao ny tetikasa “Mibilaogy ny nofinofy” an'ny Orizonturi Foundation’ , ary efa nahatsangana sahady sy mitantana ny bilaoginy ireo mpandray anjara sasany.
Amin'ny alàlan'ny tetikasa “Mibilaogy ny nofinofy”, vatsian'ny famatsiambola madiniky ny Rising Voices , nisy tamin'ny taona lasa ny klioba fanoratana bilaogy natsangana ho an'ireo mpampiasa ny tolotra fitsaboana ny aretintsaina. Nofanina tamin'ny famoronana sy fitantanana bilaogy ireo mpikambana, ary tanjona farany tamin'izany ny handrafetana bilaogy iray ifandrimbonana. Ny Orizonturi Foundation, miorina ao Câmpulung Moldovenesc , Romania, dia efa ho 15 taona no nanampy ireo olona manana aretintsaina, ary manantena fa io klioba fanoratana bilaogy io dia hanampy hampihena ny fitsaratsarampoana atrehan'ireo olona manana olana amin'ny fahasalaman'ny sainy ao Romania.
Ny bilaogin'ny tetikasa Blogging the Dream (tamin'izany fotoana izany) dia nizara tsonga vitsivitsy avy amin'ireo bilaogin'ny mpikambana tao anatiny, ka tao ireo mpandray anjara no nangatahana mba hisaintsaina ny fiantraikan'ny firotsahan'izy ireo an-tsehatra ao anatin'ity tetikasa ity. Ohatra, Andrea, 13 taona, miteny hoe :
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2019/06/13/140339/
 Orizonturi Foundation’: http://www.orizonturi.org/index-e1.htm
 famatsiambola madiniky ny Rising Voices: https://rising.globalvoicesonline.org/blog/2008/06/28/public-health-projects-to-use-citizen-media-to-empower-community-voices/
 Câmpulung Moldovenesc: http://en.wikipedia.org/wiki/C%C3%A2mpulung_Moldovenesc
 miteny hoe: https://rising.globalvoicesonline.org/orizonturi/2009/02/22/putting-it-into-practice/
 Budda-Bar Radio: http://budda-barradio.blogspot.com/
 Dragoste, Afectiune si Prietenie: http://dragoste-deea.blogspot.com/
 Lumea mea, lumea ta: http://www.lumeamealumeata.blogspot.com/
 Sensibilitate si Dorinta: http://sensibilitatesidorinta.blogspot.com/